कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै जारी लकडाउनले बन्द रहेको सेयर बजार आजदेखि खुल्ने भएको छ ।
Suvadin Media 990 0
Suvadin Media 972 0
लकडाउनमा दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिन राष्ट्र बैंकको...
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ बाट ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै कोर...
Suvadin Media 979 0
युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको जनाएको छ । ईयुले नेपाललाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र नियन्त्रण गर्न झण्डै १० अर्ब आर्थिक सहयोग गर्न लागेको हो ।
Kathmandu : The Annapurna Base Camp trek is possibly one of the most legendary treks in the world. Forcing you to face some of the biggest mountains on the planet, this two-week trek will challen...
Puru Thapaliya 1k 0
Suvadin Media 909 0
अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ऋणात्मक, किन्न...
काठमाडौं । लकडाउनले सवारी साधन र उद्योग धन्दा ठप्प हुँदा इन्धन खपतमा आएको गिरावटले अमेरिकामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पहिलो पटक ऋणात्मक भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत नभएपछि उत्पादकहरुले भण्डारण...
कच्चा तेलको मूल्यमा दुई दशकयताकै भारी गिरावट
कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
'महशुल नतिर्नेलाई इन्टरनेट सेवा दिन सक्दैनौं’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महशुल भुक्तानी हुन बाँकी ग्राहकको लाइन नकाट्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यान्वयन नगर्ने भएका छन् ।
लकडाउनमा सेवा प्रवाह गर्न क्लासिक टेकद्वारा ‘कोभिड...
काठमाडौं । नोभेल कोरोना भाईररस (कोभिड -१९) को महामारीमा विश्व आक्रान्त बनेका बेला नेपालमा पनि यसको फैलावट रोक्न लागि सरकारद्वारा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । सरकारद्वारा घोषणा गरिएको यस लकडाउनमा अति आवश...
लकडाउनमा सेवा प्रवाह गर्न क्लासिक टेकद्वारा ‘कोभिड-१९ टास्क फोर्स’ गठन
कपिलवस्तु नगरको कोरोना राहत कोषमा एलआइसी तौलिहवा श...
कपिलवस्तु नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा एलआइसी नेपाल लिमिटेड तौलिहवा शाखाले सहयोग रकम जम्मा गरेको छ ।
Suvadin Media 528 0
कपिलवस्तु नगरको कोरोना राहत कोषमा एलआइसी तौलिहवा शाखाको एक लाख सहयोग
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । २५ चैतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणासँग पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपछि अधिकारी पदभार ग्रहण गर्...
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राखी नेपाल ग्यास उद्योगले बुधबार(आज)देखि ६ स्थानबाट ग्यास वितरणको तयारी गरेकोे छ । नेपाल ग्यासको अभाव धेरै भएको गुनासो आएपछि उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्...
अब जुनसुकै कम्पनीको ग्यास पनि सजिलै साट्न पाइने
अब तपाइसँग जुनसुकै कम्पनिको ग्यास भए पनि सहज रुपमा साट्न पाइने भएको छ । बजारमा ग्यासको अवस्था सहज बनाउन नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आइतबारबाट लागू हुनेगरी यस्तो नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
वीरगन्ज नाका हुँदै भित्रिए ३० बुलेट ग्यास
वीरगन्ज हुँदै शुक्रबार ३० बुलेट ग्यास आयात गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
आज पनि घट्‍यो डलरको भाउ
काठमाडौं । निरन्तर बढेर ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको डलरको भाउ शुक्रबार पनि घटेको छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर मंगलबार सर्वाधिक कमजोर बनेको थियो । त्यसयता डलरको भाउ घट्ने क्रममा छ । शुक्रबार नेप...
अब उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर भरेको ग्यास मात्र पाउने...
नेपाल आयल निगमले सिलिन्डर आधा मात्र भरेर बजारमा पठाउन ग्यास उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ । माग अनुसार ग्यास पुर्‍याउन नसकिने भन्दै निगमले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
अब उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर भरेको ग्यास मात्र पाउने छन्
Suvadin Media 416 0
नेपाल टेलिकमको अफर : रिचार्ज बराबरकै बोनस
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बुधबार रातिदेखि लागु हुने गरी आफ्ना ग्राहकलाई रिचार्ज बराबरकै बोनस उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अघि बुधबार दिउँसोबाट नै यो सेवा सुरू गर्ने भनिए पनि प्राविधक समस्याका कारण बेल...
Suvadin Media 422 0
अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पूर्ण क्षमता...
कोरोना कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकले एक करोड रुपैयाँ उ...
ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष’मा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकले एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने
सुनको भाउ तोलामा १५ सयले घट्यो
प्रति तोला ८३ हजारमाथि पुगेको सुनको मूल्य लागतार ओरालो लागेको छ ।
Suvadin Media 282 0
सुनको मूल्य सोमबार तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ ।
तोलामै तीन हजारले घट्यो सुनकाे मूल्य
निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउमा आज भने ठूलो अंकमा गिरावट आएको छ ।
सुन र चाँदीको मूल्यमा गिरावट
नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुन चाँदी महासंघका अनुसार बिहीबार ८ सय रुपैयाँले घटेर तोलाको ८१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा २०० ले बढेको हो । आज प्रतितोला सुन ८२ हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको छ ।
Suvadin Media 290 0
राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दा संसदभित्रै कुटिए सांसद
टर्की । राष्ट्रपतिको आलोचना गरेपछि टर्कीका एक सांसदले संसदभिदै कुटिएका छन् । टर्कीको संसद बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगानको आलोचना गरेपछि सांसदहरुबीच बिहिबार विवाद भएको...
दिनदिनै सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, यस्तो छ आजको बज...
सुनको मूल्य दिनै पिच्छे बढेको बढ्यै छ । मूल्य बढ्दा दिनदिनै नयाँ नयाँ रेकर्ड पनि बन्दै गएको छ ।
दिनदिनै सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, यस्तो छ आजको बजार भाउ
बढ्यो डलरको भाउ, कुन देशको कति ?
बुधबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ । हिजो डलर एकको...